Soanierana Ivongo : tsy nitovy ny fizaram-bola, nifampitifitra ireo jiolahy | NewsMada
Soanierana Ivongo : tsy nitovy ny fizaram-bola, nifampitifitra ireo jiolahy
Par Taratra sur 14/07/2017
Mpandraharaha iray niharan’ny fanafihan-jiolahy telo nirongo basy tao Soanierana Ivongo, ny talata teo. Lasan’ireo jiolahy ny vola amina tapitrisa niaraka tamin’ireo entana sarobidy maro samihafa. Tsy nitovy anefa ny fizarana ireo entana halatra ka nifamono indray izy telo. Maty voatifitra ny iray, azo sambo-belona kosa ny jiolahy iray antsoina hoe Betagny…
Niharan’ny fanafihan-jiolahy miisa telo nitondra basy poleta sy antsy ny mpandraharaha iray ao Soanierana Ivongo, ny 27 mey 2016, ka nahaverezana vola mitentina 1 960 000 Ar, firavaka volamena, finday roa, ordinatera entin-tanana iray. Lasa nitsoaka avy hatrany ireo jiolahy taorian’izay. Raikitra ny ady saritaka tamin’ny fizaram-bola sy ireo entana halatra teo amin’ireo jiolahy satria tsy nitovy ny fizarana. Nentin-katezerana ny jiolahy iray antsoina hoe Betagny ka notifiriny tamin’ny basy teny aminy ilay jiolahy namany antsoina hoe i Ngilo. Vokany, maty tsy tra-drano i Ngilo ka navelan’ireo namany nitsarara tao anaty ala fandalovan’ny olona ny fatiny.
Nisy nahafantatra anefa ity jiolahy maty voatifitra ity ka niainga avy amin’izany ny fanadihadiana rehetra momba ny namany mpiara-manao asa ratsy aminy. Nandeha ny fikarohana sy ny fanadihadiana rehetra ka saron’ny polisy tao Antenina Soanierana Ivongo, ny talata teo niaraka tamin’ny basy poleta iray i Betagny. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny kaomisaria ao Soanerana Ivongo, ny Officier de police, Tsima Félix Angélo, jiolahy raindahiny ikoizana ao Soanierana Ivongo sy ny manodidina ary efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela izy noho ny fanaovana halatra sy vonoan’olona.
Niaiky izy nandritra ny famotoran’ny polisy fa namono an’i Ngilo namany sady tompon’antoka tamin’ny fandrobana tao amin’ilay mpandraharaha voalaza etsy ambony. Mbola karohina kosa ilay namany iray hafa tafaporitsaka. Ahitana trangana fanafihan-jiolahy matetika ao Soanierana Ivongo sy ny manodidina.